Nke kachasị mma nke 4. Nzukọ GvSIG… - Geofumadas
Nke kacha mma nke 4tas. GvSIG ...
Machị, 2009 ArcGIS-ESRI, GvSIG
Ọtụtụ ndị kwenyere na otu n'ime ihe kachasị mma enyere na ụbọchị ndị a bụ akwụkwọ akụkọ na-ezo aka na ihe omume ahụ, nke na-anọchite anya nnukwu ọrụ ọ bụghị naanị na ọdịnaya yana ọdịnaya uto. Maka ndị natara ya na mbipụta ederede, ọ na-anọchite anya ihe nchịkọta dị oke ọnụ dị ka ndị Obelix ndị na-atọ ọchị anyị na-edebe n'ime ochie ochie ma dị mma na nke na-echetara anyị nnukwu onyinye sitere n'aka nna anyị.
Nyochaa ọdịnaya ya, nke a na-ebipụta n'okporo ụzọ n'okpuru Creative Commons, anyị nwere ike ịhụ isiokwu dị iche iche nke ọma banyere mmepe nke gvSIG, yana ajụjụ ọnụ a gbara ndị tinyere aka na nkwalite na ntinye ya site na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na gọọmentị. Nke a bụ nchịkọta nke kacha mma:
Nke ụbọchị anọ
Ha akpọwo ya afọ anọ nke ọganihu, afọ anọ nke olileanya; na ịghara ichegharị ihe i nwere ike iche banyere okwu nro, e mepụtara isiokwu ndị kọwara akụkọ ihe mere eme, ihe a na-eme na ebe ọrụ a na-aga. A na-ahazi usoro a nke akwụkwọ a gburugburu isiokwu ndị a:
Njikọ ọrụ ọnụ
Site na ajụjụ ọnụ
Ndị a rụrụ nke ọma, otú ahụ ka m na-ahụ ya na-zubere ime ka unu na nọchiri ihu na ngo kwesịrị nakwa na nke ikpeazụ n'afọ na-apụta ìhè na ha na-etinye mgbalị dị ukwuu, ọ bụ uru ọ na-aghọta ihe na-arụ ọrụ nke ya nkwukọrịta strategist.
N'ebe a, m na-achikota ụfọdụ n'ime ajụjụ ọnụ ndị ahụ iji mee ka mmasị dị.
Ọkachamara ọkachamara na IDES, ọ bụ ugbu a bụ Onye isi nke Technology nke Ụlọ Ọrụ Ndị Ọrụ Mmiri na Argentina na onye nhazi ọrụ PROSIGA. N'ajụjụ ọnụ Carlos Figueira Ndị Venezuela na-ekwu maka mkpa ọ dị iji sọftụwia na-akwụghị ụgwọ na-ewere ọnọdụ na ụlọ ọrụ gọọmentị, ọkachasị obodo ndị nwere obere ọnọdụ akụ na ụba. O kwere nghọta ihe kpatara nzukọ Septemba 2009 ga-anọ na Ajentina.
N'ajụjụ ọnụ a na-adọrọ mmasị, nke ederede ederede na-echetara anyị na ọ bụ nanị Microsoft 800 ọtụtụ nde dollar kwa afọ na Latin America, ya mere, software a na-enye n'efu abụghị naanị ihe dị mkpa na akụnụba nke ndị ọchịchị ma na ọgụ megide ihe ojoo nke ekwuru maka oge anyi di ka ndi Afrika.
Na-esote Chris Puttick Ha na-ekwu okwu site na usoro Europe banyere itinye ngwanrọ n'efu na oghere steeti, yana mgbasa nke ndị ahụ metụtara ga-egwu. Okwesiri ikwu na Alessandro arụwo ọrụ dị mkpa (ma ọ bụrụ na ọ bụghị ya niile) na nsụgharị oftali nke akwụkwọ gvSIG.
Antoni de la UOC na-ekwu maka otu sọftụwia na - akwụghị ụgwọ kwesịrị isi sọsọ maka azụmahịa ndị ọzọ dịka INTERGRAPH na ESRI nwere mmemme mmekorita ya na mahadum dị iche iche. Ọ na-elekwasịkwa anya n'okwu gbasara ụkpụrụ, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke akụ na ụba nke na-adịkarị ebe a na-akụzi ihe maka nkwalite nke mmekorita mmekọrịta dịka sọftụwia n'efu na ebe Ụmụ akwụkwọ kọleji nwere ihe nwere mmasị.
Mkparịta ụka a sara mbara, na ọnụ Lluís Vicents site n'aka òtù nna ukwu UNIGIS, ezi echiche na onyinye site na echiche mahadum na-ese anwụrụ.
Na njedebe njedebe a gbara ajụjụ ọnụ na Juan Antonio Bermejo ị na-aghọta ya mere ha ji na nhọrọ nke gvSIG dị ka a na-arụ ọrụ ngwá ọrụ na oru metụtara Geographic Ozi Island Council of La Palma, ha ga-gakwuru aro ụfọdụ na-abịa maka abamuru nke na-abịa n'ụbọchị.
Maka ihe, magazine dị ezigbo mma. Na njedebe, ha na-ekwu maka ọnọdụ ndị enwere ike ịhụ na web gbasara gvSIG, n'etiti ha ngwa Google akpọrọ "Insights", nke gosipụtara uto nke okwu gvSIG nwere na mba ndị sitere na isi okwu.
Ọzọkwa na Google Trends, ha na-egosi otú mmụba si kpaa agwa gbasara okwu asọmpi dịka Geomedia, ArcView, Mapinfo na ọ ga-eju gị anya ịhụ ihe eserese ndị a gosipụtara. Maka ugbu a, ana m ahapụ pike ahụ, lee anya gvSIG peeji nke n'ihi na echeghị m na ọ ga-ewe oge maka mbipute Pdf ka ọ dịrị maka nbudata ma ọ bụrụ na ha ewere ya dị ka ihe mgbagwoju anya.
Next Post Geofumadas, otu ọnwa, postNext »
8 Na-aza “Nke kacha mma nke 4tas. Nzukọ GvSIG ... "
Gabriel kwuru, sị:
Esemokwu nke data ala ala bụ nnukwu nsogbu na Argentina. Ikwu na ihe ọ bụla a kwụrụ ụgwọ n'ụzọ ụfọdụ nwere ike ịbụ ihe na-ezighi ezi iji mesoo isiokwu a n'ụzọ dị mfe.
N'ụzọ dị njọ na Argentina, a na-emepụta mmepụta data. Ọ bụrụ na anyị anya na metadata nke data 1: 250.000, portal data PROSIGA na IGM, ọtụtụ n'ime ndị a data-aga azụ ka afọ 30, 40, 50. Ọbụna 250.000 nke a na-agbanyeghị na 96-98 anaghị eme ka ọ dị ugbu a. O nweghị ihe ọzọ dịnụ kemgbe ahụ n'ihi enweghị ego. Amaara m na otutu ndị mmadụ etinyela mgbalị, oge na ego mmadụ niile iji chebe data ndị ahụ ruo ọtụtụ iri afọ. N'aka nke ọzọ, FDI na-anọchi anya àgwà na-aza ajụjụ, a pụtara na ahụ na-eme ka dị na data ga-eme ya na-kwesịrị ekwesị àgwà njikwa, n'ịwa kwesịrị ekwesị akwụkwọ, kọwaa kwa nke usability, etc, etc, wdg Ma ọ bụ ezie na ọ kwere, ihe niile na-abịa si a otutu ego, ego na ala na-adịghị etinye na-na ihe ọmụma, ka naanị n'ịwa ahụ mkpa nke ukwuu data.
Enwere ike ibudata magazin ahụ na weebụ
XuRxO kwuru, sị:
Eeh, na m nọnyeere gị n’okwu a toro eto karịa ndị IDE, ihe na - eme bụ na (opekata mpe n’okwu m maara) ọtụtụ oge nchịkwa anaghị eduzi ụlọ ọrụ katọn dị ka ebe nyocha na imepụta ihe omumu maka ọha mmadụ mana dị ka “ụlọ ahịa” mmadụ ọ bụla ga-aga ịzụta.
M ka na-echeta ezighi ezi nke ịkwụ ụgwọ (Anaghị m echeta ole) maka ntinye akwụkwọ nke nyochaghachi nke gọọmenti vertex na ndị nnọchite nke IGN, mgbe ọ dị ọtụtụ afọ nke a gaara ebipụta na weebụ.
Agbanyeghị, ma ọ bụrụ na i nwere mmasị na isiokwu nke free geodata, ị nwere ike ịkwụsị site na ndepụta nke ihe OSGeo-es , e nwere otu ìgwè nke ndị mmadụ na-ekpokọta data tent n'efu na n'ozuzu na-arụ ọrụ na ebe .
Na ogbako, n'ezie ekwesịrị imetụ isiokwu ahụ n'otu n'ime ihe ngosi. N'ime akwụkwọ akụkọ ahụ, ọ bụghị ozugbo, naanị Chris Puttick na-ekwu okwu dị mkpirikpi banyere ihe metụtara ya, mgbe a jụrụ ya gbasara ọrụ sọftụwia na-anaghị akwụ ụgwọ na nchịkwa ọha (Page 20)
Jesus kwuru, sị:
Ndewo, otu ihe: onye ọ bụla kwuru banyere ngwa GVSIG maka geomarketing? bụ ịkọpụta ihe na-ezo aka na blog m mgbe mbipụta pdf nke ogbako ahụ bụ.
Gerardo Paz kwuru, sị:
Jorge, Steeti akwụlarị ụgwọ ọrụ ndị a site na mmefu ego a na-ekenye Institute. Mgbe m kwuru Ọchịchị, ọ bụ otu ihe ahụ ka ndị Argentine. Anyị niile na-akwụ ụgwọ ihe ndị a, ya mere, n'arịrịọ anyị, anyị ga-enwe ike iwepụ ya n'enweghị ihe ọ bụla, n'ihi na ha akwụlarị ụgwọ. Ma ọ bụ ikekwe mgbe ịzụrụ ihe ị chọghị were were ya n’ụlọ? Anyi nwere 'zuta' ma ha adighi enye ha anyi ..
Na nke a na-eme na ebe ndị ọzọ ... nke ọma, na-enweghị ebumnuche iwe, cheta okwu «Ọjọọ nke ọtụtụ, nkasi obi nke ndị nzuzu! .. Ọ bụ ihe anyị ga - achọ. Anyị na-eme mkpesa banyere ụtụ isi mana anyị anaghị achọ ka ha nye anyị ihe anyị jiri ha kwụọ ... Ọ baghị uru.
Juan Ernesto na-ekwu banyere ngwanrọ, amaghị m ihe nke ahụ metụtara mmepụta nke data n'efu.
Nsogbu ị kwupụtara bụ n'ozuzu ya n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ obodo ọ bụla na ụwa ma e wezụga United States na Canada, na ụfọdụ ikpe dị ùgwù.
Na Spain ọ dịkarịa ala, anyị eruola nyefe data maka ojiji ndị na-abụghị nke azụmahịa site n'aka ụfọdụ ndị na-emepụta ihe nkiri (IGN, Catalonia, Murcia, ...) mana ọ ka nwere ụzọ dị anya ị ga-esi nweta data efu n'efu. Luckily dịkarịa ala anyị na-ama nwere software. 🙂
Ezi ndetu. Ọ dị oke njọ ịhụ Juan Ernesto Ricket nke Militarylọ Akwụkwọ Argentine Military Geographical Institute na-ekwu banyere "mkpa ọ dị ka iji sọftụwia na-efu n'efu na ụlọ ọrụ steeti, tumadi obodo ndị nwere oke oke akụ na ụba," mgbe, n'eziokwu, ọ bụ ihe dị mkpa iji budata GIS data elektrọnik. na-eji Institute ahụ n'efu.
Ndị ọzọ okwu, ndị a ndị mmadụ, ndị na-ala ọrụ, na-eji Argentine State ego ha na-arụ ọrụ ha, nakwa na o yiri ka ịzọpụta ọma ndị ego iji free software, ekwela ka ọha na eze unu kpamkpam download data. M na-aghọta na a biri ebi map nwere a na-eri. Ma mmepụta nke digital data Ugbua akwụ ụgwọ na kpomkwem na mmefu ego ekenyela site State Institute Argentino.
Were ihe nlere nke Canada, nke n’achighi kwa onye Canada ka inweta data obodo….